दलान नेपाल : पहाडीकरणले सदभावनालाई समाप्त पार्यो - रमण पाण्डे
पहाडीकरणले सदभावनालाई समाप्त पार्यो - रमण पाण्डे
at 10:00 PM Posted by Dalan
रमण पाण्डे - केन्द्रिय सदस्य, सदभावना पार्टी
रमण पाण्डे २०४७ साल मंसीर ७ गते देखि अहिले सम्म नेपाली बोलेका छैन । नेपाली राजनिती देखि मधेश राजनिती र नेपालमा हिन्दी आन्दोलनका लागी प्रख्यात महोतरीको पिपरा गाउका हुन पाण्डे । पाण्डे सदभावनाका संस्थापक विद्यार्थी नेता हुन । उनी ०४७ सालमा विद्यार्थी नै हुदा सदभावना पार्टीले काठमाडौको टुडिखेलमा आमसभाको आयोजना गरेका थिए । त्यही सभा मधेशी नेताहरु हिन्दीमा भाषण गर्दा याहाका एउटा उच्छृख्ल समुहले पाण्डेलाई बेसरी कुटेका थिए । त्यही दिन अर्थात ७ मंसीर ०४७ मा पाण्डेले नेपालमा हिन्दीले नेपाली सरह मान्यता नपाउन्जुल आफु नेपाली नबोल्ने निर्णय गरे । अहिले सम्म उनी नेपाली बोलेका छैन । हालै काठमाडौ आएको बेला उनीसंग हिन्दीमै गरिएको कुराकानीको नेपालीनुवाद -
सदभावना पार्टी किन समाप्तीको बाटोमा लागेको होला ?
- त्यसको धेरै कारणहरु छन । तर मुऋयगरी दुई तीन ओटा ठाउमा पार्टी र नेतृत्वको यस्तो कदम रहयो कि आखिर अन्तोग्वा सदभावनालाई समाप्त नै पार्ने अवस्थामा ल्याई छाडयो । सबै भन्दा पहिला त गजेन्द्र नारायण सिंहको अवशान लगत्तै सदभावनालाई कब्जा गरिने प्रयास भयो । त्यतीबेला दुई जना उपाध्यक्षहरु थिए । बद्री मंडल र हृदेश त्रिपाठी । हामी सबैले त्रिपाठीलाई नेतृत्व गर्न आग्रह गर्यो तर उनले मानेनन, त्यसपछि मंडलले कब्जा गरेर दरबार तिर लग्यो सदभावनालाई । त्यसपछि हामी वडो मेहनतका साथ सदभावनाको पंजा छापलाई त्याहावाट फुत्कायौ तर त्यतीवेला हामीले ठुलो गल्ती गरेका छौ । उक्त समयमा हामी भरतविमल यादव र हृदेश त्रिपाठीलाई माइनस गर्यौ र राजेन्द्र महतोलाई काखी थाप्यौ । राजेन्द्र महतो अगाडी आएर काम गर्ने छाटकाट पनि देखाए । तर अन्तोगत्वा जनकपुर अधिवेशनमा गएर उनले सदभावनाको अस्तीत्वनै समाप्त पार्ने गरी पार्टीलाई पहाडीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । जुन समुदायसंग हामी आफना अधिकारका लागी लडीरहेका छौ । अर्थात जो शासक हुन्छ त्यो शासितहरुलाई किन अगाडी आउन दिन्छ । सदभावना पार्टीले शुरु देखि नै पहाडमा जनजाती र दलीतका मुद्धा उठाउदै आएका छन । तर जनकपुर महाधिवेशनले सबै पहाडी समुदायका लागी पार्टीलाई खुल्ला गरेर पहाडीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । उनीहरुलाई किन चाहिन्छ सदभावना पार्टी । सुनियोजित रुपमा लागेर आखिर समाप्त पारेर देखाईदिए ।
उसो भए सदभावनामा लागेका बर्षै देखिका नेताहरुको भविष्य के हुन्छ त ?
- हेर्नुस राजनितीमा सम्भावनाको खेल हुन्छ । त्यसैले सदभावना पार्टीले लोकतन्त्र, मधेशवाद र भारतसंगको विशेष सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि वढयो भने कुनै न कुनै रुपमा मधेशी जनताले फेरी ठाउ दिने नै छ । नत्र अब उठन सक्दैनन । माओवादीको पिछलग्गु बनेर यसरी नै मधेशी पार्टीहरु अघि वढी नै रहयो भने सबै समाप्त हुनेछ ।
भारतसंगको विशेष सम्बन्ध किन चाहियो मधेशी पार्टीहरुलाई ?
- मधेशकै समबन्ध भारतसंग विशेष छ , अनी मधेशीको हक अधिकारका लागी लडछु भन्नेले विशेष समबन्ध नराखी हुन्छ । भारतसंग मेरो रिश्तेदारीको सम्बन्ध छ । काठमाडौको पो छिमेकि छन भारत हाम्रो रिश्तेदारीको अर्थात रगतको सम्बन्ध छ । हाम्रो भारतसंगको सम्बन्धमा काठमाडौ र पहाडी शासकवर्गले विचलन ल्याउन प्रयास गरिरहेको मेरो बुक्राई छ ।
तर विश्लेषकहरुले त भारतको प्रायोरिटिमा मधेश पर्दैन न भन्छन त ?
- भारतको प्रायोरिटिमा मधेश पर्नु पनि हुदैन । जुन दिन भारतको प्रायोरिटिमा मधेश पर्छ , त्यो हाम्रो रिश्तेदारीको सम्बन्ध समाप्त भएर जान्छ । रिश्तेदारलाई पनि प्रायोरिटीमा कहि राखिन्छ । त्यसको महत्व आफैमा विशेष हुन्छन के ।
तपाई नेपाली होईन भन्या ?
- म अहिले सम्म नेपाली भएको महसुस गरेकै छैन । यो राज्यले अहिले सम्म मलाइ नेपाली हुन नै दिएनन । म पनि नेपाली हुन र त्यो महसुस गर्नकै लागी यत्रो संघर्ष गरिहेका छौ । तर यो राज्यले मलाई सधै तिमी मधेशी नै हौ भनेर अनुभुति गराईरहेका छन । त्यसैले आजसम्म म मधेशी नै छु ।
तर आजका युवाहरु त्यस्तो मान्ला र ?
- हेर्नुस, ग वाट गणपति र गद्या दुवै हुन्छ । राज्यले मधेशीहरुको पहिचान समाप्त पार्ने यत्रो ठुलो षडयन्त्र विगतमा बुनिसकेको छ कि त्यसको सिधा प्रभाव आजको युवा पिढीहरुमा देखिन्छ । सदभावना पार्टी त्यतीकै आज समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छैन नि । नत्र जुन समुदायका नागरिक आफनो देशमा ८० प्रतिशत राज्श्व तिर्छन र तिनको हालत यस्तो, आखिर किन ?
अन्तमा भन्नुपर्दा, मधेशी पार्टीहरुलाइ अब कसरी अगाडी वढनुपर्छ ?
- मधेशी पार्टीहरु माओवादीको साथ छोडनु पर्छ अनि मधेशमै पनि दुई धारको राजनिती छ । त्यसैले मधेशी पार्टीहरु विचको लोकतान्त्रिक धारहरु एकै ठाउमा बसेर एउटै पार्टी बनाउनुको अब विकल्प छैन ।